Muranka Xubnaha Liiska Baarlamanka Ka Dhiman
Tuesday, May 21, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 07:56
Madaxweynaha Soomaaliya Sharif Sheekh Axmed iyo Ergayga gaarka ah ee QM, ee Somalia Augustine Mahiga ayaa markale maanta yeeshay kulan ay uga dooddeen waxa laga yeelayo xubnaha wali lagu dhagan yahay ee laga reebay liiska baarlamaanka cusub, kuwaasoo lagu eedeynayo inay danbiyo galeen.
Sheekh Sharif ayaa sheegay inay cawaaqib xumo ay dhalin karto in qof aan maxkamadi danbi ku helin in laga reebo baarlamaanka cusub. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Sheekh Sharif iyo Mahiga isla garteen in xubnaha lagu dhagan yahay qaarkood loo ogolaado inay baarlamaanka ka mid noqdaan. Maxmed Colaad ayaa warbixintan kooban nooga diyaariyay. Halka hoose ka dhageyso.
Warbixinta Mahiiga iyo Madaxweynaha halkan hoose ka dhageyso